Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.2.3 Mmechi
Arụmụka nhazi mmadụ na-ejikọta ọrụ nke ọtụtụ ndị na-abụghị ndị ọkachamara iji dozie nsogbu dị mfe-ọrụ-nnukwu nsogbu nke kọmputa anaghị edozi. Ha na-eji usoro nkwekọrịta-iche-iche iji mebie nnukwu nsogbu n'ime ọtụtụ microtasks dị mfe nke ndị na-enweghị nkà pụrụ iche ga-edozi. Usoro nhazi nke ụmụ mmadụ na-enyere aka na kọmputa na-ejikwa ngwa igwe na-amụ ihe iji gbasaa mgbalị ụmụ mmadụ.
Na nchọpụta mmadụ, a na-ejikarị arụ ọrụ ọrụ nchịkọta mmadụ na ọnọdụ ebe ndị nchọpụta chọrọ ịhazi, koodu, ma ọ bụ aha ihe oyiyi, vidio, ma ọ bụ ederede. Nhazi ndị a abụghịkarị ihe ikpeazụ nke nyocha ahụ; kama ha bụ ihe onwunwe maka nyocha. Dịka ọmụmaatụ, a pụrụ iji ngosipụta nzuzo nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị mee ihe dị ka akụkụ nke nyocha banyere usoro nke arụmụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ụdị microtasks ndị a dị iche iche ga-arụ ọrụ kachasị mma mgbe ha anaghị achọ ọzụzụ pụrụ iche na mgbe enwere nkwekọrịta sara mbara banyere azịza ziri ezi. Ọ bụrụ na ọrụ nhazi ahụ bụ ihe kachasị mkpa - dị ka, "Akụkọ akụkọ a ọ na-adịghị mma?" - mgbe ahụ, ọ na-aghọwanye ihe dị mkpa ịghọta onye na-ekere òkè na ihe mgbaru ọsọ ha nwere ike iweta. Na njedebe, njirimara nke mmepụta nke ọrụ nchịkwa mmadụ na-adabere na njirimara nke ntinye ndị ndị na-ahụ maka mmadụ na-enye: mkpofu n'ime, mkpofu.
Iji mee ka okwukwe gị sie ike, tebụl 5.1 na-enye ihe atụ ndị ọzọ gbasara otú e si jiri nyocha mmadụ mee ihe na nchọpụta mmadụ. Tebụl a na-egosi na, n'adịghị ka Zoo Zoo, ọtụtụ ọrụ nchịkọta mmadụ ndị ọzọ na-eji ụlọ ọrụ ahịa microtask (dịka, Amazon Mechanical Turk) ma dabere na ndị ọrụ akwụ ụgwọ karịa ndị ọrụ afọ ofufo. M ga-alaghachi na nke a nke mkpali nke onye otu mgbe m na-enye ndụmọdụ maka ịmepụta ọrụ ịmekọrịta nke onwe gị.
Isiokwu 5.1: Ihe Nlereanya nke Ngwá Ọrụ Na-atụle Mmadụ na Nnyocha Nlekọta Mmadụ
Ndị so na ya
Usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Ederede Ọrụ ahịa ọrụ Microtask Benoit et al. (2016)
Wepu ihe omuma ihe site na ozi ndi ozo banyere ihe ndi ozo na 200 obodo US Ederede Ọrụ ahịa ọrụ Microtask Adams (2016)
Kọọ akwụkwọ akụkọ Ederede Ọrụ ahịa ọrụ Microtask Budak, Goel, and Rao (2016)
Wepu ihe omuma ihe site na ederede nke ndi agha na Agha Uwa 1 Ederede Ndị ọrụ afọ ofufo Grayson (2016)
Chọta mgbanwe na map Foto Ọrụ ahịa ọrụ Microtask Soeller et al. (2016)
Lelee akara algorithmic Ederede Ọrụ ahịa ọrụ Microtask Porter, Verdery, and Gaddis (2016)